Ahoana no tokony hampisondrotra ireo mpivarotra B2B ny paikadim-barotra momba ny atiny | Martech Zone
Raha manohy manadihady ireo mpitarika marketing izahay, manadihady ireo fironana amin'ny Internet, ary mahita ny valin'ny ezaka ataontsika manokana hanampiana ireo mpanjifantsika, dia tsy isalasalana ny amin'ny herin'ny marketing amin'ny atiny ho an'ny ezaka fividianana B2B. Ny orinasa dia mikaroka ny fividianany manaraka an-tserasera mihoatra ny taloha.
Ny olana anefa dia mamokatra atiny tsy mandaitra loatra ireo orinasa. Rehefa nanontaniana ireo mpivarotra B2B nahomby ny antony niasan'ny marketing amin'ny atiny dia 85% no naoty avo lenta kokoa, atiny mahomby kokoa famoronana eo amboniny. Manohy manery a tranomboky atiny manatona amin'ireo mpanjifanay manokana izay anoratanay ireo tranga sy banga amin'ny atiny, ary miasa mba hamokarana lohahevitra voafaritra sy avo lenta.
Fomba fiasa stratejika mifantoka amin'ny famoronana sy fizarana atiny sarobidy, mifandraika ary tsy miova mba hisarihana sy hitazomana ny mpihaino voafaritra mazava - ary, amin'ny farany, hitarika ny hetsiky ny mpanjifa mahasoa.
47% amin'ireo mpivarotra B2B no nilaza fa manana fanamby amin'ny famatsiana loharanon-karena amin'ny paikadim-barotra momba ny votoatiny Mahita an'izany ihany koa izahay miaraka amin'ny mpanjifanay manokana ary niasa mba handaminana ireo dingana hampihenana ny enta-mavesatra amin'ny mpanjifanay.
Ohatra, manana mpanjifa iray izahay ary manomana isa-maraina isa-bolana mba handrakitra podcast marobe. Mandritra izany fotoana izany dia raketinay amin'ny horonan-tsary koa izy ireo. Avy eo mahafehy ny podcast izahay, mamoaka ireo horonantsary, mampita izany amin'ireo mpanoratra antsika, mamokatra lahatsoratra ho an'ny fananana sy ny haino aman-jery azo avy eo, ary avy eo manangona ireo valiny ho azy ao anaty gazety isan-kerinandro. Ity fahombiazana ity dia miteraka ampahany kely amin'ny fotoana laniana amin'ny fampivoarana atiny ary koa nampiroborobo ny fandraisana andraikitra noho ny fampifanarahana amin'ny fantsona rehetra.
Ny orinasa dia tsy mila mitady famatsiam-bola fanampiny na loharano ho an'ny marketing amin'ny atiny raha ny ankamaroan'ny atiny tsy mamokatra vokatra akory. Raha toa kosa ny orinasa, nampihena ny habetsaky ny atiny tsy dia novokarina ary nifantoka tamin'ny atiny tena nirotsaka, mifandraika ary tiana, afaka mamonjy fotoana izy ireo ary mampitombo ny fiantraikan'ny ezak'izy ireo.
Araka ny lazain'ny Ivotoerana Marketing Marketing, 39% isan-jato no mikasa ny hitombo ny fandaniam-bolan'ny marketing amin'ny atiny mandritra ny roa ambin'ny folo volana manaraka
Miaraka amin'ny tontolon'ny marketing atiny tsy miova, ny fanarahana ny teknika farany farany sy ny fitaovana dia nanjary tsy maintsy atao, ka izany no mahatonga ireo orinasa mihamaro ny misaina hevitra hanao ny paikadin'izy ireo hahomby araka izay azo atao amin'ny taona ho avy. Ireo orinasa ireo dia vonona kokoa handany vola be hanohanana ny drafi-barotra amin'ny taona ho avy. GroupM dia maminavina fa ny fandaniana amin'ny totalin'ny varotra manerantany dia handalo ny $ 1 tapitrisa tapitrisa tokonam-baravarana voalohany tamin'ny taona 2017. Jomer Gregorio, Digital Marketing Philippines
Ity misy infographic mampahalala mampino, Fironana momba ny marketing amin'ny atiny B2B amin'ny taona 2017.
Tags: 2017b2bfironana marketing momba ny atiny b2bb2b marketingfironana marketing b2bContent Marketingfironana marketing amin'ny atinyphilippines marketing dizitalyny fironana
Ohatrinona ny vidin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny outsourcing?